भैरहवास्थित टाइगर प्यालेस रिसोर्ट गैर आवासिय नेपाली नागरिक इन्द्रबहादुर थापाले खरिद गर्ने::KhojOnline.com
भैरहवास्थित टाइगर प्यालेस रिसोर्ट गैर आवासिय नेपाली नागरिक इन्द्रबहादुर थापाले खरिद गर्ने
काठमाडौं । भैरहवास्थित टाइगर प्यालेस रिसोर्ट गैर आवासिय नेपाली नागरिक इन्द्रबहादुर थापाले खरिद गर्ने भएका छन् ।
अष्ट्रेलियन कम्पनी सिल्भर हेरिटेज ग्रुपको लगानी रहेको होटल अब बिक्री हुने अन्तिम चरणमा पुगेको देखिन्छ ।
३ करोड २९ लाख अमेरिकी डलर तोकिएको होटलको मूल्य तिर्नका लागि थापा तयार भएपछि होटल मालिकले सम्पत्तिको स्रोत खोजेका थिए । थापाले २० अर्बको सम्पत्तिको स्रोत देखाएका थिए ।
गत जुलाई ३१ मा होटलले कन्डिसनल लेटर र बाइन्डिङ लेटर समेत प्राप्त गरेको जनाइसकेको छ । जस अन्तर्गत थापाले होटलमा २० मिलियन अमेरिकी डलर नगद बुझाउनुपर्ने छ । भने बाँकी १३.९ मिलियन अमेरिकी डलर विभिन्न नेपाली बैंकहरुबाट लिइएको कर्जामा रुपान्तरण गरिनेछ ।
यसका लागि थापाले ३ मिलियन अमेरिकी डलर १५ अगष्टभित्र बुझाइसक्नुपर्नेछ । त्यसपछि थप ३० दिनका लागि डीडीएको लागि समय दिइनेछ ।
सिल्भर हेरिटेजले भनेको छ, ‘राम्रोसँग अध्ययन र अनुसन्धान गरेपछि बोर्डले खरिदकर्तालाई डीडीए गर्नका लागि अनुमति दिएको छ, यसका लागि आवश्यक कागजात उपलब्ध गराइने छ ।’
त्यस्तै, सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले थापालाई सम्पूर्ण रकम भुक्तानीका लागि ९० दिनसम्मको समय उपलब्ध गराउनेछ ।
मलेसियामा बस्ने थापा प्रवासी नेपाली हुन । उनी त्यहाँ रहने नेपालीहरुमा सबैभन्दा धनी प्रवासी नेपाली हुन । थापा नेपाली मुलका मलेसियन नागरिक हुन् । टाइगर प्यालेस खरिद गर्न नेपालका विभिन्न व्यवसायिक घरानाले चासो देखाएका थिए । तर,थापाले यो डिलमा बाजी मारेका छन् ।
होटलमा प्रत्येक महिना १५ हजारभन्दा बढी ग्राहकहरु आउँछन । जुन नेपाली होटल तथा रिसोर्टको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो ।
होटलमा १०० रुम छन भने यो दक्षिण एसियाको पहिलो इन्टिग्रेटेड फाइभ स्टार क्यासिनो रिसोर्ट समेत हो । सन् २०१७ मा पर्यटन विभागद्वारा पाँच तारे होटलको मान्यता पाएको टाइगल प्यालेसमा विशेष गरी भारतीय पर्यटक र लुम्बिनी जाने बौद्य धर्मालम्बीहरुका ग्राहकहरु जाने गरेका छन् ।
१५ विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रिसोर्टमा २ वटा भिल्ला, जीम, स्पा, स्वीमिङ पुल, रेष्टुराँ र मिटिङ रुमसँगै बेन्क्युट पनि छ ।
मङ्ल, साउन २१, २०७६ मा प्रकाशित
यूवराज खतिवडाको ग्राण्ड डिजाईनमा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि लगाएका सतही आरोपहरुको छानविन गठित समितिका सदस्यले राजीनामा दिए।
अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडाको ग्राण्ड डिजाईनमा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि सरकारले लगाएका सतही आरोपहरुको छानविन गठित समितिका सदस्य रामजी रेग्मीले १६ दिनपछि राजीनामा दिएका छन् । सरकारले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ बिरुद्ध तथ्यबिहीन आरोप लगाउँदै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिलाई छानविन गर्न निर्देशन दिएको थियो । गत कार्तिक...
भारतबाट चितवनसम्म पाइपलाइनबाटै डिजेल र ग्यास
भारतबाट पाइपलाइनमार्फत अमलेखगन्जसम्म डिजेल आयात सुरु गरेको नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यास पनि पाइपलाइनबाटै ल्याउने भएको छ । भारत मोतीहारीबाट चितवनसम्म खाना पकाउने ग्यास ल्याउन पाइपलाइन निर्माण गर्न निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)बीच सहमति भएको छ । करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा ग्यास, पेट्रोलियम पाइपलाइन...
नेपालको हिटलरले पोलीग्राफ परिक्षण गर्न अस्वीकार
बम बनाउँदै गर्दा पड्केर घाइते भएकाहरूलाई इँटाभटामा ज्युँदै पोलेर मारेको आरोप लागेका नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहम्मद अफताब आलमले पोलीग्राफ परिक्षण गर्न अस्वीकार गरेका छन्। ‘हामीले पोलिग्राफ टेस्ट गर्न उहाँको सहमती खोजेका थियौं तर उहाँले मान्नु भएन’, प्रहरी भन्यो। यसलाई भरपर्दो प्रमाण नमानिए पनि कुनै व्यक्तिले घटनाका बारेमा...
सालको पातको व्यापारले प्रभाव पारेको नाला बजार
एक समय थियो अनेकोटबाट सालको पात नाला बजार हुंदै भक्तपुरमा लैजान्थ्यो / अनेकोटका तामाङ्ग जातिले डोकोमा बोकेर ल्याउन्थे / दैनिक जसो ५०/६० भारी बोकेर ल्याउन्थे / छालाको नाम्लोले बोकेर झन्डै ३० किलो मिटरको गह्रंगो भारी बोक्नुको कम्ताको दुख थिएन /तैपनि उनीहरुको मुस्कानमा खुशी नै भए...
बैंकको सिस्टम ह्याक गरेर डेढ करोड निकालिएको घटनामा नयाँ खुलासा
काठमाडौं। कृषि विकास बैंकको सिस्टम ह्याक गरेर डेढ करोड निकालिएको घटनामा नयाँ खुलासा भएको छ । खासमा यो निकालिएको रकम लुटको ‘मास्टरप्लान’को सानो हिस्सा मात्र थियो । लुटमा मुख्य ‘मास्टरमाइण्ड’ले नेपाली बैंकबाट पूरै ५ अर्ब रुपैयाँ लुट्ने योजना बनाएका थिए । उनले यो ‘मास्टरप्लान’लाई मुम्बइमा...
के गोंगबु विकृतिको केन्द्र बन्दै छ ?
श्रोतका अनुसार यसरी देहव्यापारमा लाग्नेहरु १५ देखि ४० वर्षसम्मका महिलाहरु रहेको पाइएको छ । होटेलवालासितको सम्पर्कको आधारमा ती महिलाहरु यस्तो कार्यमा लाग्छन् । काठमाडौंको टोखा नगरपालिकामा भौतिक विकास निमाणको काम तिब्रगतिमा भइरहेको छ । हरेक ठाउँमा राम्रो कामको विकास जुन गतिमा बढीरहेको हुन्छ, त्यहाँ नराम्रो कामले...